२५ वर्ष पुरानो विमान कम्पनी जेट एयरवेज धरासयी बन्दैछ किन ? - Corporatebazar.com
२५ वर्ष पुरानो विमान कम्पनी जेट एयरवेज धरासयी बन्दैछ किन ?
corporatebazar -आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको भारतीय निजी विमान कम्पनी जेट एयरवेजको संकट दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।
एयरवेजले केही दिन पहिले मात्र आफ्ना सबै उडान अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
एयरवेजले आपतकालीन कर्जा नपाएसँगै सबै उडान बन्द गरेको हो । एयरवेजले आग्रह गरेअनुसारको ४ सय करोड भारु आपतकालीन कर्जा नपाएसँगै आफ्ना सबै उडान अस्थायी रुपमा बन्द गर्ने निर्णय लिएको बताएको थियो ।एयरवेजका सीईओ विनय दुबेले आफ्नो उडान जारी राख्नका लागि एसबीईसँग तत्कालै ६४० करोड रुपैयाँ दिनका लागि आग्रह गरेका थिए ।
२५ वर्ष पुरानो एयरलाइन्स कम्पनी जेटसँग अहिले १ अर्ब २० करोड डलर बराबरको ऋण छ । जेटको संकट बढेसँगै ४०० जना पाइलटले जागिर छोडिसकेका छन् । अब जेटसँग १३ सय जना पाइलट मात्र बाँकी रहेका छन् । ३ महिनादेखि तलब नपाएका कारण अरु पाइटलहरु पनि आन्दोलनमा रहेका छन् । जेट एयरवेजका २० हजार कर्मचारीहरुको जागिर धरापमा रहेको र उनीहरुको जागिर अब केबल कर्जादाताहरुको हातमा रहेको बताइएको छ ।
सरकार र बैंक जिम्मेवार
तलब नपाएका कारण उनीहरुलाई बच्चाहरु पढाउन र घरव्यवहार धान्न पनि मुस्किल भएको छ । केही कर्मचारीहरु आफ्नो साधन बेच्न र गहनाहरु बेच्न बाध्य भएको बताइएको छ । मुस्किलमा रहेका कर्मचारीहरुले केही दिन पहिले दिल्लीमा एकत्रित भएर प्रधानमन्त्रीसँग मद्दतका लागि शान्तिपूर्ण आग्रह पनि गरेका थिए । कर्मचारीहरुले जेटको त्यस्तो संकटपूर्ण अवस्थाका लागि सरकार र बैंकलाई नै जिम्मेवार बताएका छन् ।उता बैंकहरुको संगठनले सरकारलाई जेट एयरलाइन्स अधिग्रहण गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । ताकि जेटका कर्मचारीहरुको भविष्य सुरक्षित रहोस् । यसका साथ सरकारलाई बैंकहरुमाथि एयरलाइन्सलाई कर्जा दिनका लागि धेरै दबाब नदिन पनि भनेको छ ।
लिलामी प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने
त्यस्तै जेट एयरवेजले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई बाहिरी मानिसहरुसँग र विशेषगरी मिडियासँग कुरा नगर्नका लागि आदेश दिएको छ । एयरलाइन्सको हिस्सेदारी बेच्नका लागि जारी लिलामी प्रक्रियामा प्रभावित हुनसक्ने भन्दै एयरवेजले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई बाहिरी मानिससँग नबोल्न आदेश दिएको बताइएको छ ।
अस्थाई रुपमा बन्द जेट एयरवेजका कर्मचारीहरुले आफ्नो तलब र एयरलाइन्सलाई आकस्मिक कर्जा दिलाउनका लागि राष्ट्रपति कोविन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले लिखीत रुपमा पत्र लेखेर एयरलाइन्सका कर्मचारीहरुको करियरलाई संकटबाट बचाउन भनेका छन् ।
कर्मचारीहरुले जेटको सञ्चालन बन्द हुदाँ त्यससँग जोडिएका अन्य मानिसहरु पनि प्रभावित हुने बताएका छन् । यसबाट हाल यात्रुहरु मारमा छन् भने कर्मचारी संगठनले पनि हवाई भाडा बढाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
दोर्दी खोला जलविद्युतले ५५ करोडको आइपीओ निष्काशन गर्ने
इन्फ्लुएन्जाका कारण वालिङका १७ स्कुल एक हप्ताका लागि बन्द